ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျမွို့မှာ မကျြလုံးခှဲစိတျကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ ပကျထရဈရှာ – မြန်မာသတင်းစုံ
ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျမွို့မှာ မကျြလုံးခှဲစိတျကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ ပကျထရဈရှာ
ခဈြစရာအပွုံးလေးနဲ့ ဘိုမရုပျလေးလို လှလှနျးတဲ့ ရှာရှာကတော့ သူမရဲ့မကျြစိဝဒေနာကွောငျ့ ဘနျကောကျမှာ သှားရောကျခှဲစိတျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ငယျစဉျကတညျးက မကျြလုံးအားနညျး ခဲ့ပမေယျ့ အဆငျပွသေေးတယျဆိုပွီး ဒီတိုငျးနနေရေငျးက နောကျဆုံးမှာတော့ ဘနျကောကျကို သှားရောကျခှဲစိတျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ မခှဲစိတျခငျကကွောကျနပေမေယျ့ တကယျတမျးခှဲစိတျတော့လညျး အခြိနျသိပျမကွာပဲ အဆငျပွခေဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။
ပရိသတျတှကေစိတျပူလို့ဝိုငျးဝနျးမေးမွနျးတဲ့အခါမှာလညျး ရှာရှာတဈယောကျ စိတျရှညျ လကျရှညျနဲ့ ပွနျလညျဖွကွေားပေးခဲ့ပါသေး တယျ။ မကျြလုံးခှဲစိတျတာကို အလှအပဆိုငျရာ ခှဲစိတျတယျလို့ထငျပွီး မှတျခကျြပေးသူတဈယောကျကို ” Plastic surgery လုပျရငျ အဲ့လို မကျြလုံးကွီးတဈဖကျတညျးကို ကာထားရတာပေါ့? ခှဲစိတျတာနဲ့ပဲ plastic surgery လို့ တှေးခြ လိုကျရော ” ဆိုပွီးလညျး ပွနျလညျရှငျးပွ ခဲ့ပါသေးတယျ။
ခှဲစိတျခနျးဝငျပွီး ပွနျထှကျလာတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ” Operation successfully completed ကွောကျနခေဲ့ပမေယျ့ တကယျတမျးခှဲစိတျ တော့အခြိနျက ၁၅ မိနဈလောကျပဲကွာတယျ ” ဆိုပွီး ဝမြှေခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ အမွနျဆုံးသကျသာပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို အကောငျးမှနျဆုံး ပွနျလညျပတျနိုငျပါစေ ရှာရှာရေ။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ မျက်လုံးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ
ချစ်စရာအပြုံးလေးနဲ့ ဘိုမရုပ်လေးလို လှလွန်းတဲ့ ရှာရှာကတော့ သူမရဲ့မျက်စိဝေဒနာကြောင့် ဘန်ကောက်မှာ သွားရောက်ခွဲစိတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မျက်လုံးအားနည်း ခဲ့ပေမယ့် အဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုပြီး ဒီတိုင်းနေနေရင်းက နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘန်ကောက်ကို သွားရောက်ခွဲစိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မခွဲစိတ်ခင်ကကြောက်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းခွဲစိတ်တော့လည်း အချိန်သိပ်မကြာပဲ အဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကစိတ်ပူလို့ဝိုင်းဝန်းမေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်း ရှာရှာတစ်ယောက် စိတ်ရှည် လက်ရှည်နဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသေး တယ်။ မျက်လုံးခွဲစိတ်တာကို အလှအပဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်တယ်လို့ထင်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသူတစ်ယောက်ကို ” Plastic surgery လုပ်ရင် အဲ့လို မျက်လုံးကြီးတစ်ဖက်တည်းကို ကာထားရတာပေါ့? ခွဲစိတ်တာနဲ့ပဲ plastic surgery လို့ တွေးချ လိုက်ရော ” ဆိုပြီးလည်း ပြန်လည်ရှင်းပြ ခဲ့ပါသေးတယ်။
ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ပြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ” Operation successfully completed ကြောက်နေခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းခွဲစိတ် တော့အချိန်က ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ် ” ဆိုပြီး ဝေမျှခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံးသက်သာပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို အကောင်းမွန်ဆုံး ပြန်လည်ပတ်နိုင်ပါစေ ရှာရှာရေ။
Previous Previous post: သကျကွီးဟာသလူရှငျတျောကွီးမြားကို အလှူငှမြေားနဲ့အတူ ရိုသစှောကနျတော့ခဲ့တဲ့ ခငျလှိုငျ
Next Next post: ဘုရားဆင်းတုတော် (၂၁၁၁)ဆူရှိတဲ့ လုဗ္ဗနီဥယာဉ်တော်ကြီးသို့သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့တဲ့စမိုင်းလ်တို့မိသားစု